Muva nje, inani elikhulayo lamaRussia lizama ukuthola umsebenzi wesikhathi esithile. Ngakho-ke, ukuthandwa okukhulu kutholakala ngokusebenza kuyi-Internet ekhaya. Izinzuzo Ekushintsheni ngesikhathi esifanayo ujabulela impumelelo ephezulu. Lezi zingathengiselana, lapho ungathola khona imali ngokubhala imibhalo. Kodwa-ke, ngenxa yokukhangisa kabanzi nokukhangisa okuvamile, imali emakethe ye-Forex ithola ukuthandwa.
Ngeshwa, ngokuvamile ukusebenza ngokushintshanisa ngemali kubangele abantu abangafundile ngokwezimali. Bafuna imali elula futhi esheshayo, kodwa kaningi balahlekelwa imali eningi. Ukuze ungabi yisisulu semakethe ye-Forex, kubalulekile ukuqonda nokusebenzisa njalo imithetho embalwa elula.
Ngokuvamile, abadayisi bathi imali yokuthola imali ayinamkhawulo futhi ilula kakhulu. Khumbula, ngokuvamile bakusho lokhu kuphela ukuheha amakhasimende. Izinkampani eziningi, ngaphezu kokukhangisa, zinikeza ukuzothatha isigaba samahhala lapho kungenakwenzeka ukuthi ufunde ukuhlaziywa kwezingcaphuno ze-stock. Kungenzeka ukuthi uzotshelwa izindaba eziningi, lapho abesifazana abancane nabaphuzi bazuza izigidi. Esikhathini esimnandi, uzophefumulelwa ukuthi uzokwazi ukwenza kanjalo. Udinga nje ukuvula i-akhawunti ngenani elincane futhi uthenge iphakheji lokuqeqesha lezincwadi noma amadiski.
Umthetho wokuqala okumele ukhunjulwe: imali etholakalayo kwi-stock exchange ayikho ngokushesha. Akunakwenzeka ukwenza izigidi ezingaphezu kwezingu- $ 100 ezinyangeni ezimbalwa.
Ngaphezu kwalokho, kuyiphutha ukucabanga ukuthi akukho lwazi oluzodingwa ukuze kuhwehwe. Lokhu Umbono kuyindlela efanele yokulahlekelwa yisimo sakho. Umsebenzi we-trader uqala ukuzithuthukisa njalo, ukuhlaziywa okuvamile kolwazi, ukulungele izinguquko nokufuna amasu amasha, ngaphezulu.
Akufanele uhwebe ku-Forex ngemali yokugcina. Inani oyifaka ku-akhawunti akufanele libe yinto ebalulekile kwisabelomali sakho. Yakha isu lokuhweba bese ulandela ngokucacile. Uma ngezinye izikhathi idiphozi igcwele, ungasheshi ukuyigcwalisa. Misa kangcono futhi ucabange ngalokho okwenzile okungalungile. Mhlawumbe ungathuthukisa isu lokuhweba.
Kubalulekile ukuthi ufunde indlela yokulawula imizwelo yakho. Izenzo ezingavamile zivame ukuvumela ukuthi ukwandise amaholo wakho ku-stock exchange. Ngokuphambene nalokho, ngokuvamile baholela ekulahlekelweni okuphawulekayo. Ngisho noma uqinisekile ukuthi izenzo ezithile zizokuzuzisa, zama ukungaziphambuki emigomeni namasu akho.
Kodwa uDeveli akasabeki kakhulu njengoba eqoshiwe. Kunoma yikuphi, ukuhola ku-Forex Inikeza umthengisi isiguli inani elikhulu lamathuba:
- awunamathele ohlelweni oluthile, ngenkathi unamaviki azinzile - ngoMgqibelo nangeSonto;
- asikho isidingo sokuya ehhovisi, ungasebenza noma kuphi, into esemqoka ukuthi ube nokufinyelela okuqinile kwi-Inthanethi;
- Imali engenayo engalinganiselwe kuphela ngamathuba akho nolwazi;
- futhi, okubaluleke kakhulu, awunawo umphathi, zonke izinqumo ozizenzayo.
Ukuze uhwebe ngempumelelo ku-Forex, kubalulekile ukuhlola kahle amandla abo. Uma uqiniseka ngamakhono akho, ungangena ngokuphepha endleleni eya esikhathini esizayo. Into eyinhloko, khumbula: ukushintshaniswa akuyona ikhasino, kuyindlela enzima kakhulu efuna ukulalela nokukwazi ukufunda.
CCI-ukukhanya: ukuthi kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani? Inhlanganisela CCI futhi MACD izinkomba lapho ngidayisa kwi "Forex" emakethe
Oxnardts: izikhalazo, izincomo, amazwana
Sacroiliitis - kuyini? Sacroiliitis: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa
Amathrendi ukuthi kuyoba ethandwa kuleli hlobo, kanye nalezo ulahlekelwe ukuqondana abo
Ingxenye ngayinye ocean - kungcono ucezu iyonke
Sounder "Piranha": izici, izilinganiso umsebenzisi kanye nokubuyekeza
"Purmo" (radiators): Ukucaciswa kanye nokubuyekeza
UMariya Lesovaya: Biography futhi ukuphila siqu iqhaza embukisweni "Top Model ngesiRashiya"
Kuyini i-invoyisi futhi yini inqubo ukugcwaliswa?
Imikhuba Yabangane Abajabulayo
I Novomikhailovsky emzaneni: ebhishi, ulwandle, iholide